नेकपा विदेश विभागको समीक्षा : ‘सी भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नेकपा विदेश विभागको समीक्षा : ‘सी भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो’
आश्विन २९, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेकपाको विदेश विभागले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र चासो बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । विभागको मंगलबार बसेको बैठकले सीको भ्रमणका कारण अमेरिका र भारतजस्ता देशहरूको नेपालप्रति रुचि बढ्नुलाई सकारात्मक भनेको छ ।
विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासोलाई उपयोग गर्ने अवसर आएको र यसबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण तयार भएको निचोड पनि विभागको छ । ‘हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनायौँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता बढेको महसुस पनि सी भ्रमणले गराएको छ । सीको भ्रमण कुनै बाधाबिना सम्पन्न हुनु राज्य परिपक्व भयो भन्ने पुष्टि हो ।’
दुई मुलुकबीच भएका समझदारी/सम्झौताले नेपालमा विकासको ढोका खोलेको र यसलाई नेपालले जतिसक्दो धेरै उपयोग गर्नुपर्ने निचोड पनि नेकपा विदेश विभागको छ । आपसमा भएका समझदारी/सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै मुलुकले प्राविधिक बैठकहरू सुरु गर्नुपर्ने रिजालले बताए ।
सी भ्रमणको समीक्षा गर्न नेकपा सचिवालयको बैठक बुधबार बिहान बस्दै छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफलले समीक्षा बैठकको समय तय गरेको हो । ‘हामीले चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अत्यन्त सफल भएको निष्कर्ष निकालेका छौँ, औपचारिक छलफलका लागि बुधबार बिहान बैठक बस्दै छ,’ नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने । उनले बैठकले पार्टी एकीकरणको बाँकी काम पनि टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:५७
सवा सय वर्षपछि हात्तीसारको लय
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि छुट्याए बजेट
संघले जिम्मेवारी दिए योजना अघि बढ्ने
आश्विन २९, २०७६ प्रताप विष्ट
(हेटौंडा) — राणाकालमा तत्कालीन राजा र मन्त्री सिकार खेल्ने सोख राख्थे । काडमाडौं खाल्डोबाट निस्कने जत्था फर्पिङ हुँदै मकवानपुरगढी झरेर भीमफेदी पुग्थ्यो । त्यहाँ आरामदायी हौदासहित जंगल सफारीका लागि एक दर्जन हात्ती तयार राखिन्थे । सिकारमा तराई निस्केको जत्थाले फर्केर भीमफेदीमै बास गर्थ्यो । सिकारसहित फिर्ने लस्करका लागि खान बस्न व्यवस्था थियो ।
वि.सं. १९५२ मा बेलायती महारानी एलिजाबेथ र जंगबहादुर राणालगायतले हात्ती सवारीमा प्रयोग गरेका हौदाहरू रहेको भीमफेदी–६ को हात्तीसार संग्रहालयलाई पुनर्जीवन दिन तयारी सुरु भएको छ । २०४५ सालपछि प्रयोगविहीन हात्तीसारमा यतिबेला हात्ती छैनन् । सवारी गर्दा हात्तीमाथि बस्न विभिन्न प्रकारका ४२ वटा हौदा र चुनासुर्कीले बनाइएको भव्य भवन इतिहासको साक्षी छ । १९९० र २०७२ को भवनले क्षति पुर्‍याउन नसकेको भवन भए पनि सरकारी योजना अभावमा हात्तीसार संग्रहालय करिबकरिब बेवारिसे हालतमा छ । सिकार, पिँजडा र रासनपानी राख्ने व्यवस्थासहितका हौदाहरू प्रयोगमा नआउँदा माकुराले जालो लगाएको छ । अजंगको भवनमा भित्रीभागको तल्लोपट्टि लाइन लगाएर हौदाहरू राखिएका छन् । बिनातलब रखवारी गर्दै आएका भरतसिंह लामाले हात्तीहरू बाँधेर राख्ने ठाउँमा मकैका घोगा फिँजाएर राखेका छन् । भवनभित्र चिम छन्, बल्दैनन् । महसुल नतिरेकाले प्राधिकरणले हात्तीसारको बिजुली काटिदिएको एक दशक भइसकेको छ । भीमफेदी बजारसँग जोडिएको हात्तीसार क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरेर स्थानीय केहीले घर बनाएका छन्, केहीले खेतीपाती गरिरहेका छन् ।
इतिहास बोकेको हात्तीसार चितवन राष्ट्रिय निकुन्जले मातहतको इकाईका रूपमा भए पनि लामो समयदेखि न संरक्षणका कार्यक्रम थिए, न त सरकारको चासो थियो । प्रदेशभित्रको ऐतिहासिक स्थल भएकाले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको बल्ल ध्यान गएको छ । डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडालाई प्रदेश सरकारले उक्त क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारीसँगै बजेट दिने भएको छ । प्रदेशको चासोपछि डिभिजन वन प्रमुख इमानाथ पौडेल र भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामालगायतले गत शनिबार हात्तीसार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे । ‘हात्तीसारको जग्गा नापनक्सा र संरक्षणको जिम्मा चितवन निकुन्जले डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘हाम्रो प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले यसका लागि चालु वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, हामीले गाउँपालिकाबाट १० लाख छुट्याएका छौं ।’
संघ सकारात्मक भए अपेक्षित रूपमा योजना अघि बढ्ने उनले बताए । ‘हात्तीसारमा हात्ती नै ल्याएर सिकार नखेलाए पनि ३२ रोपनी जग्गामा फैलिएको यो क्षेत्रमा कम्पाउन्ड लगाउने, बाटोमा ढुंगा छाप्ने, हात्तीका मूर्ति राख्ने र सिकार खेल्न जाँदाको जंगबहादुर र एलिजाबेथको सालिक बनाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘यति गर्न सके हाम्रो क्षेत्रको पनि पर्यटकीय आकर्षण बढ्छ ।’ तराईलाई काठमाडौं उपत्यका जोड्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माणअघिसम्म भीमफेदीकै बाटो चलनमा थियो । मकवानपुरको यो पुरानो सदरमुकामको आकर्षण बढाउनका लागि हात्तीसार संग्रहालयको योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक भएकाले गाउँपालिकाको पनि आत्मबल बढेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । ‘योजनाअनुसार काम गर्न सकियो भने भीमफेदीमात्रै होइन नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्धको इतिहासले पनि लय पाउँछ,’ उनले भने ।
संग्रहालयका हेरालु ७० वर्षीय भरतसिं लामाका अनुसार हात्तीसारका संरचना र सामग्री न्यूनतम लगानीमै पुन: दर्शनीय बनाउन सकिने अवस्थामा छन् । ‘नेपाल आउँदा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यहाँबाट सिकारी हौदा कसिएका हात्ती चढेर चितवन र पर्सा गएकी थिइन् । त्यो जत्थाले बाघ र गैंडाको सिकार गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाका चारवटा सिकारी हौदा छन्, जंगबहादुरले प्रयोग गरेका पिँजडा हौदा पनि छन् ।’ त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघि भीमफेदीमा ठूला दर्जाका स्वदेशी र विदेशी आएर हात्ती चढेर सिकार खेल्न जाने गरेको भीमफेदीको सुपिङका ८३ वर्षीय नलसिंह लामाले बताए । ‘त्यतिबेला भीमफेदीको चहलपहल धुमधाम थियो, हात्ती आउजाउ गरिरहन्थे,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला हात्तीसारभरि नै १०–१५ वटा हात्ती हुन्थ्ये । अहिले सुनसान छ ।’ अझै पनि संरक्षणको योजनाले भीमफेदीको आकर्षण बढाउने उनले बताए ।
हात्तीसारलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न कुनै समस्या नभएको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले बताए । उनले भने, ‘यो संघीय सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेशले पहल गर्दा हुने प्रक्रियाको कुरा हो ।’ राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का प्रदेश र स्थानीय तहले अपनत्व लिएर योजना अघि बढाउने भएपछि संघले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न समस्या नहुने बताउँछन् । संघीय राजधानी प्रवेश गर्ने छोटो वैकल्पिक रुट हेटौंडाबाट भीमफेदी भएर कुलेखानी हुँदै दक्षिणकाली र फर्पिङ सडक सञ्चालनमा छ । भीमफेदीमा क्षेत्रीय कारागार पनि छ ।
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:५५
दाहालको प्रतिवेदनमा के आउँदैछन् नयाँ विषय ?
भारतीयको नागरिकता रद्द
दुई दिन वर्षा र हिमपात !
लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय राख्ने/नराख्नेबारे सांसद र कर्मचारीबीच विवाद
उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन पाइनन् सुत्केरी
हुम्ला र मनाङमा हिमपात